Karootada sii kordhaysa guga | December 2019
Karootada beerashada guga: talooyinka ugu fiican
Ugu Weyn Ee Karootada sii kordhaysa guga
Karootiga, oo aan caadeysannahay inaan u isticmaalno isticmaalka khudradda, sayniska waxaa lagu magacaabaa "Beerta lagu beeray." Tani waa noocyada kala duwan ee dabacasaha duurjoogta ah, warshad laba sano jir ah. Ku dhowaad 4000 sano ka hor, dabacasaha ayaa markii ugu horreysay lagu beeray oo loo adeegsaday cunto. Tan iyo markaas, dalagga this xidid ku noqday qayb muhiim ah ee suxuunta ugu badan ee loo diyaariyey in ay ku jiraan cuisines.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Karootada sii kordhaysa guga 2019